Amin 'ny fiainan' ireo olona ao Brezila, indrindra fa ny fomba ny velona
Amin ‘ny fiainan’ ireo olona ao Brezila, indrindra fa ny fomba ny velona
Brezila no hany firenena matanjaka ao Amerika latina ny toe-karena fa ny fialan-tsasatra, fa mihazakazaka any an-hay resena sakana, anisan’izany ny fahantrana ny ankamaroan’ny mponina, ny tsy fahampian’ny fampianarana sy mahay ny mpiasa, ny tsy fisian’ny foto-drafitrasa sy ny maro hafa ny heloka. Brezila, toy ny hafa firenena Amerikana latina dia tsy zaka kosa, rehefa mifandray amin’ny olona iray manan-karena izao tontolo izao fotsy sy ny mahantra ny olona avy any amin’ny laharana ny Indiana sy ny métis.
Taorian’ny mpifanolo-bodirindrina i Arzantina dia namihina ny large-scale krizy, Brezila dia lasa efa ho ny lehibe indrindra ara-toekarena lasa firenena ao amin’ny faritra. Brezila dia manana mponina efa ho ny myelin ny olona mandroso ny hery fahefana, izay mifototra amin’ny bioenergetics sy ny asa HPP. Misy lasa nandroso indrindra ny sehatra indostrialy, ny firenena dia mahatonga ny maro ny fiara sy manintona global ny fampiasam-bola. Tao anatin’ny taona vitsivitsy, i Brezila dia ny ady amin’ny kolikoly, fa ny fomba tsy mahomby foana, eto tsy te-hanao mamafa ny lalàna izay mety fomba mahomby hanasazy ny mpiasam-panjakana mpanao kolikoly, ny fomba lehibe indrindra dia ny hampitombo ny karama amin’ny seha-panjakana, izay matetika tapaka hiala amin’ny eo ho eo, izany dia mihevitra fa ny olona miaraka amin’ny lehibe karama dia tsy mandray tsolotra fa ny tahotra ny ho very toerana.
Eto no tena malaza ny kiantranoantrano, ny kolikoly amin’ny ambaratonga no tena avo
Any Brezila dia tsy misy ny saranga, ny sangany ara-tsosialy, ny mpandraharaha sy ny governemanta sy ireo mpiasam-panjakana rehetra ireo no mandrafitra ny mponina ao, ny sisa rehetra amin’ny Breziliana mahantra. Ny ara-tsosialy ny fahasamihafana eo amin’ny kilasy isan-taona bebe kokoa hitombo, fianakaviana mahantra tsy afaka mandefa ny zanany any amin’ny sekoly tsy miankina, izay hanome ny mendrika lenta ny fampianarana, vokatry ny taranaka vao misondrotra, izay tsy afaka ny hifaninana ao amin’ny tontolo maoderina. Bahoaka, ny sekoly dia toy ny fonja, izay ny ankizy no mipetraka fotsiny ary tsy mianatra any amin’ny sekoly tsy miankina dia afaka cost $ isam-bolana ho an’ny ankizy ny vola ihany no afaka mifidy ny iray
← Ny aterineto mazava ho azy fa amin'ny teny portiogey mba hanomboka hianatra ho maimaim-poana - ny
Tovovavy ao Brezila, Brezila ny Vehivavy anti-panahy sy ny Matavy Lady →